MobileTrans - Ruo mgbe ị na-eji ya, gị mgbe ghọtara nnọọ otú ihe ị chọrọ! Mụta ihe >>
- Site PCWorld, 11/14/2013
Dee a nyochaa maka ngwaahịa a iji nweta a free ikike >>
Ihe dị egwu APP site Rob n'ógbè nlekọta ọrụ
M a na-achọ nile internet na egwu ụbụrụ m na otú m ike ịnyefe data si m Sony Xperia Z3 m Iphone 5s na ala ma, le m na-asụ ngọngọ n'ime a dị oke egwu ngwa. N'ezie mfe iji na ọ bụ chi-eziga maka mmadụ niile si n'ebe a na-agaghị nyochawa kpọrọ. Ajọ omume ngwa Daalụ nke ukwuu. Egwu
Oké ngwaahịa site Matt
Mgbe inwe ezinụlọ gbanwee gburugburu nke igwe a mere ọrụ effortlessly swapping kọntaktị gburugburu 3 dị iche iche igwe na dị iche iche operationg usoro! Great usoro.
MobileTrans site Muhammad Luqman
Nke a dị nnọọ aka software maka mbufe data si mobile ka mobile.
Ịrịba site Ben
Hapụrụ m ka m kwaga niile m na voicemails n'elu ka ọhụrụ ekwentị! Egwu.
Ya All Ezi site Dee Taylor
Ị gaghị na-aghọta otú bara uru na nke a bụ ruo mgbe ị na a jikọtara 4REALLLL !!!!!
samsung taabụ 2 site Lohit Tripathy
ọ bụ nnọọ mfe iji, na egwu ngwa
Great Product site Dennis
Nke a bụ n'ezie oké na mfe iji ngwaahịa. Zọpụta m tọn oge.
Wondershare MobileTrans Review site Tyson Otterstein
oké ngwa site Qadeer Ahmed
Ezigbo Team, unu bụ ndụ Nzọpụta m n'ihi na m wad ike gwụrụ na egwu otú na-ndabere nke mobile data bụrụ na nke ọ bụla mberede ma ekele gị otu òtù ndị kere onye dị otú a mma apụtakarị ngwa iji ya.
Ọ bụ ezughị okè, ma ọ na-darned nso site Terence
Kpa ye ebufe site na HTC ka a Galaxy Cheta 2, m ta mgbo na zụrụ software. Ezi nhọrọ m na-ekwu. The wuru na visual nduzi (tinyere ekiri ihuenyo na mobile) mere Mbido ezigbo mfe. The data transfer wee na-enweghị a ikedo, yep, ego ọma nọrọ!
TunesGo-eme gị music, na-eme ihe iTunes apụghị. Mụtakwuo